संसद् विघटन : काँग्रेसभित्र दुई थरी विचार प्रकट, सडकमा जाने कि चुनावमा ? – Interview Nepal
संसद् विघटन : काँग्रेसभित्र दुई थरी विचार प्रकट, सडकमा जाने कि चुनावमा ?
काठमाडौं, पुस ८ । संसद विघटन भएसँगै सत्तारुढ दल दुईतिर लागेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलवार केन्द्रीय समिति विस्तार गरेका छन्। उनले आफ्नो पार्टीको प्रवक्तामा नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई उक्त जिम्मेवारी दिइसकेका छन्।
यता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले माधव नेपाललाई अध्यक्षनमा चयन गरेका छन्। उनीहरुको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई नेकपाको अध्यक्षबाट हटाएका छन्।
सत्तारुढ दलभित्रको यो रडाकोले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस भने दोधारमा परेको छ। संसद विघटनको विरोधमा सडकमा उत्रने कि आमचुनावमा जानेरु यी दुई विषयमा मंगलवारको केन्द्रीय समितिमा विषय प्रवेश पाएको छ। यता संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘असंवैधानिक’ कदमलाई कसरी लिने भन्नेमा प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेसभित्र दुई थरी विचार प्रकट भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध छलफल गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको मंगलबार सुरु बैठकमा संसद् पुनःस्थापनातिर कि निर्वाचिततिर केन्द्रीत हुने भन्नेमा मत बाझिएको हो ।
सार्वजनिक खपतका निम्ति विज्ञप्ति निकाल्ने बाहेक सभापति देउवा प्रधानमन्त्री ओलीको कदमप्रति आक्रामक छैनन् । आफै अघि सरेर प्रतिवादमा पनि उत्रिएका छैनन् । मंगलवारबाट शुरु भएको काँग्रेस केन्द्रीय समिति बुधवार पनि जारी रहने र अझै केही दिन लम्बिने पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए।